Force Android Nougat update ကို Huawei P9 Lite တွင် | Androidsis
Francisco Sanchez | | Huawei, လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
လက်ရှိတွင် Marshmallow တွင်ရှိနေသေးသည့် Android သုံးစွဲသူအရေအတွက်သည် Android Nougat ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့်အရာများထက်ပိုမိုများပြားသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာကိုငါဘယ်မှာယူရမလဲ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကို install လုပ်ဖို့သင်ပေးပြီး Android 7.0 update ကို Huawei P9 Lite မှာအတင်းခေါ်ယူမယ် ဥရောပဆိပ်ကမ်းသည် L-31.
ဤနည်းအားဖြင့်, ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲအနာဂတ် updates များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် software ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီး၎င်းဖြစ်စဉ်ကိုပြုလုပ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်သောကြောင့် update ကိုစတင်ပါ။
2 Firmware ဥရောပဗားရှင်း (C432) ကို download လုပ်ပါ။
4 recovery ကို install လုပ်ပါ
6 အခမဲ့ Firmware ထည့်သွင်း။
7 အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို HiCare အက်ပ်မှတဆင့်
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာမခံချက်ကိုဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆို terminal ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီးလက်ရှိအာမခံချက်ရှိလျှင် Android Marshmallow သို့ကျွန်ုပ်တို့ပြန်သွားရမည်။
ဒီသင်ခန်းစာကိုမလေ့လာခင် အရန်ကူးရန်ကြိုးစားပါ အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်ကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အရာအားလုံးကိုဖျက်ခြင်းဖြင့်စက်ရုံပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ.
ဤနည်းလမ်းကိုတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီမှတဆင့် ၀ ယ်ယူပြီးမည်သည့်အာမခံချက်နှင့်အမြဲတမ်းမရှိသောသူများအား Android Nougat သို့မွမ်းမံရန်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ကိုက်ညီပါတယ် ဒီသင်ခန်းစာဥရောပဆိပ်ကမ်း (L-31) အတွက်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားပါ။ သို့သော်လက်တင်အမေရိကရှိဆိပ်ကမ်းများ၌အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုအတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။
အကယ်၍ သင်ဒီကိုဝေးဝေးရောက်နေပြီဆိုရင် Huawei P9 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကိုလည်းသင်စိတ်ဝင်စားမှာသေချာသည်။ P9 lite ကိုဘယ်လို root လုပ်မလဲ နှင့်တစ်ခု In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဟွာဝေး P9
Firmware ဥရောပဗားရှင်း (C432) ကို download လုပ်ပါ။
ဤကိစ္စတွင်ငါသည်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာ လင့်ခ် google play ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောပြhaveနာများရှိသည်နှင့်သင့်အားမှန်ကန်စွာဖုန်းကိုမှန်ကန်စွာပြင်ဆင်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဥရောပဥရောပဗားရှင်းဖြစ်သော C432B160 ၏တည်ငြိမ်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။ Update.app ဟုခေါ်သောဖိုင်ကိုသာမထားမချင်းကျွန်ုပ်တို့သည် unzip ရမည်။ ထုတ်ယူပြီးပြီဆိုလျှင် SD ကဒ်တွင် dload ဟုခေါ်သောဖိုဒါတစ်ခုဖန်တီးသည်။ ၎င်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ unzipped လုပ်ထားသောဖိုင်ကိုကူးယူလိုက်သည်။
ငါအခြားသင်ခန်းစာအစောပိုင်း၌ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့, ကျွနု်ပ်တို့သော OEM သော့ဖွင့်ခြင်းရွေးစရာများနှင့် USB debugging ကိုသက်ဝင်စေရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုဒ်ကိုတောင်းခံရန်ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ရပါမည် Huawei စာမျက်နှာ သူတို့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ပါ။
နောက်ပိုင်းတွင်အတူ ဤ tool တစ်ခု ကျနော်တို့ bootloader သော့ဖွင့် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော Android ဗားရှင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို install လုပ်ရန်ဤကိစ္စတွင် Marshmallow ။ ငါ zip အတွင်း၌သင်တို့ကိုငါသော့ဖွင့် tool ကို, Marshmallow များအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူနှင့်ငါအသီးအသီးအဘို့အဘယ်သို့သောအကြောင်းရှင်းပြပါလိမ့်မယ်နှစ်ခုဖိုင်များကိုထားခဲ့တယ်။
recovery ကို install လုပ်ပါ
terminal ကို fastboot mode ဖြင့်စတင်သည်, Volume- နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကို pc သို့ဆက်သွယ်သည်။
ငါ TWRP Marshmallow ၏အမည်နှင့်ငါဇစ်အတွင်း၌ငါစွန့်ပစ်သော folder ကို unzip ကျနော်တို့ bat အတွက်အဆုံးသတ်သောဖိုင်ကိုစတင်ပါ.
ပြီးရင် Enter နှိပ်ပြီး recovery ကသူ့ဟာသူ install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဥရောပ P9 Lite ဆိပ်ကမ်းများအားလုံးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ခုတည်းသော sim ဖြင့်လာသည်။ သို့သော်၎င်းကို dual sim ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးစရာရှိသည်။ ငါ OEMINFO ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖိုင် ၂ ခုထားခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအတူတူမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခုက Dual Sim အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခုက Single Sim အတွက်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် OEMINFO ss ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်ပုံသေအတိုင်းဖြစ်သည်။
OEMINFO ဖိုင်ကို SD ထဲသို့ထည့်သည်
ကျနော်တို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode မှာစတင်ပါ ပြီးတော့ကျွန်တော် Install လုပ်ပါတယ်
SDIN ပေါ်တွင် OEMINFOC432SS ဟုခေါ်သောဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသည်
ကျနော်တို့အတည်ပြုရန်ဘားလျှောဖြင့် flash ။
အဆိုပါ sim slot သည်ဒုတိယအနေဖြင့်အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည်ဟု software-enabled function ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
ဖိုင်ကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ငါတို့လုပ်ရမှာကပဲ နောက်ကျောကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ကျောပြန်လည်ထူထောင်ရေးစတင်သွားပါ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖွင့်မယ့်အစား၊ ကျနော်တို့ terminal ကိုလုံးဝပိတ်ထား Reboot> Power off option ကိုအသုံးပြုပါ။
အခမဲ့ Firmware ထည့်သွင်း။
firmware ကို install လုပ်ပါ အခမဲ့ဗားရှင်း၏ C432B160 သည်ဤသင်ခန်းစာအစတွင်ဖော်ပြခဲ့သော update.app ဖိုင်ကို dload ဖိုင်တွဲအတွင်းရှိ SD ကဒ်တွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤအဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြီးပါကလုပ်ရန်ကျန်နေသည် ခလုတ်ပေါင်းစပ် Volume ကို +, Volume- နှင့်ပါဝါအားလုံးချက်ချင်းအသစ်က firmware ကိုလျှောက်ထားရန်။
အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို HiCare အက်ပ်မှတဆင့်
ယခု update ကိုအတင်းရန် Android Nougat လိုချင်တာကငါတို့လုပ်ချင်တာက HiCare အက်ပ်ကိုတပ်ဆင်ပါကျွန်ုပ်တို့၏တယ်လီဖုန်းအတွင်း၌ဆင်းမ်ကဒ်တစ်ခုထားရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Huawei ID မှစတင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မူလနိုင်ငံကိုပြုပြင်ပါ OS update ၏ပထမဆုံးအသုံးပြုသူများကိုရွေးပါ ထို့အပြင်၎င်းသည် C432B370 သို့မဟုတ် B371 ဗားရှင်းကိုအလိုအလျှောက်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Force 7.0 ကို Huawei P9 Lite တွင် update လုပ်သည်
အဆင်ပြေတယ်! အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးနှင့်ကောင်းစွာရှင်းပြသည် !!
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီပုံမှန် P9 အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုကီးဘုတ်ထည့်စရာမလိုဘဲကျန်ရှိသည့်တပ်ဆင်ပြီးသည့်နောက်စက်ရုံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်၎င်းအားကျွန်ုပ်အားဂူဂဲလ်အကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်မပြုပါ။
Francisco၊ link ကိုပြန်လည်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ပေါ်လာတယ်
Chromebook အသစ်များသည် Android အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်အထောက်အပံ့ကိုလက်ခံရရှိသည်
တွစ်တာသည်၎င်း၏ Android၊ iOS နှင့်ဝဘ်အတွက်၎င်း၏ interface ကိုသက်တမ်းတိုးသည်